Shiinaha FM30 Taxanaha Xamuulka Isolator Switch (AC) warshad iyo soo saarayaasha | FEIMAI
• Heerkulka heerkulka Ha ka badnaan 40 ° C, celceliska heerkulka, Measuerd oo ka sarreysa saacadaha 24h, kama badnaan 35 ° C;
• Heerkulka jawigu waa inuusan ka hooseyn -250 ° C;
• Waa inaan lagu rakibin wax ka badan 2000m dusha sare;
• Heerkulka ugu sarreeya 40 ° C, qoyaan hawo ah oo hawo ah oo aan ka badnayn 50%. Heerkulka hoose, Heer sare ayaa loo oggol yahay, Sida 20 ° C, illaa 90% qoyaan loo oggol yahay Waxay qaadan doontaa daaweynta gaarka ah ee biyaha uumiga.
Switch Wareegga kala-goynta culeyska taxanaha FM30 waxaa loo adeegsadaa AC 50Hz, waxaa lagu qiimeeyaa danab shaqeynaya ilaa 440V, waxaa lagu qiimeeyaa ilaa 100A wareegyada korantada, qalabka hawo-gelinta, qaboojiyaha iyo matoorrada biyaha ee mashiinka furaha nidaamka, sidoo kale si toos ah ayaa loo xakameyn karaa - matoorka karti-darrada.
Swit Wareegyada Rotary waxay u hoggaansamaan: GB / 14048.3 iyo IEC60947-3.
.FM30 taxanaha qeexida, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A iyo 80A, qiimeynta 100A ee hada.
Switch Wareejinta taxanaha FM30 waxay leedahay cabir yar, qaab dhismeed kooban, xulasho aad ufiican, sifiican u dahaaran, oo leh farta, amaan iyo kalsooni, waxaad kuwa kale ku dari kartaa xiriirada xirmooyinka caadiga ah ee 3-cirif ah adigoon kala qaadin furaha.
FM30 taxanaha masaafada kala-wareejinta ee ka weyn kan kale, ka fur xawaaraha, kuna habboon beddelka DC.
Xaaladaha shaqada ee caadiga ah
Heerkulka heerkulka Ha ka badnaan 40 ° C, celceliska heerkulka, Measuerd oo ka badan 24h, kama badnaan 35 ° C;
Temperature Heerkulka jawigu waa inuusan ka hooseyn -250 ° C;
♦ Waa inaan lagu dhejin meel ka sarreysa 2000m beddelkeeda;
Temperature Heerkulka ugu sarreeya ee 40 ° C, qoyaan isku dhow oo hawo ah oo aan ka badnayn 50%. Heerkulka hoose, Heer sare ayaa loo oggol yahay, Sida 20 ° C, illaa 90% qoyaan loo oggol yahay Waxay qaadan doontaa daaweynta gaarka ah ee biyaha uumiga.
Jawi nadiif ah ayaa loo baahan yahay ；
Fadlan raac rakibaaddayada gacanta.
Lagu kala saaray isticmaal
Lagu kala saaray heer difaac
(1) Sanduuq caag ah oo aan lahayn ： IP2L0
(2) Sanduuqa balaastigga ah ： IP65
Joogtaynta: 8 saacadood oo shaqo ah / waajibaad xilliyeed goos goos ah, / soo noqnoqoshada hawlgalka waa 30 jeer. Nolosha korantada: 10,000 jeer / AC-23, 6,000 jeer / AC-3, xiriiro kaabayaal ah 2000 jeer.
FM30 Taxanaha albaabka xirida Hagaha Rakibidda D2 (50/100/150/200)